nibbāna – Page2– Dhammadīpa
Tag Archives: nibbāna
Faith in Dhamma
Posted on 10 Feb 2018 by Ashin Sopāka
“A large tree withamighty trunk,
branches, leaves, and fruit,
firm roots, and bearing fruit,
isasupport for many birds.
Having flown across the sky,
the birds resort to this delightful base:
those in need of shade partake of its shade;
those needing fruit enjoy its fruit.
Just so, whenaperson is virtuous,
endowed with faith,
of humble manner, compliant,
gentle, welcoming, soft,
those in the world who are fields of merit—
devoid of lust and hatred,
devoid of delusion, taintless—
resort to suchaperson.
“They teach him the Dhamma
that dispels all suffering,
having understood which
the taintless one here attains nibbāna.? – AN 5.38
patiṭṭhā hoti pakkhinaṁ.
sevanti naṁ vihaṅgamā;
Chāyaṁ chāyatthikā yanti,
sorataṁ sakhilaṁ muduṁ.
sevanti tādisaṁ naraṁ.”
“Te tassa dhammaṁ desenti,
Yaṁ so dhammaṁ idhaññāya,
အကိုင်း အခက် အရွက် အသီးနှင့် ပြည့်စုံ၍ ပင်စည်လုံးပတ်ကြီးမားပြီးလျှင် အမြစ် အရင်း ခိုင်ခံ့လျက်အသီးနှင့် ပြည့်စုံသော သစ်ပင်ကြီးသည် ငှက်အပေါင်းတို့၏ နားနေရာဖြစ်သကဲ့သို့။ ပျော်မွေ့ဖွယ်ကောင်း၍ (ငှက်အပေါင်းတို့) စုဝေးရာအရပ်၌ ထိုသစ်ပင်ကြီးကို ငှက်အပေါင်းတို့မှီဝဲကုန်ဘိသကဲ့သို့၊ အရိပ်အလိုရှိသော ငှက်တို့သည် အရိပ်သို့ ကပ်ရောက်ကုန်ဘိသကဲ့သို့၊ အသီးအလိုရှိသော ငှက်တို့သည် အသီးကို စားလျက် သွားကုန်ဘိသကဲ့သို့။ ထို့အတူ သာလျှင် သီလနှင့်ပြည့်စုံသော နှိမ့်ချသော အကျင့်ရှိ၍ မခက်မထန်သောတင့်တယ်ကောင်းမြတ်သော အမှု၌ မွေ့လျော်သော ပြေပြစ်နူးညံ့သော သဒ္ဓါ တရားနှင့် ပြည့်စုံသောပုဂ္ဂိုလ်ကို။ စွဲမက်မှု’ရာဂ’ကင်းသော အမျက်ထွက်မှု’ဒေါသ’ကင်းသော တွေဝေမှု’မောဟ’ ကင်းသောအာသဝေါကင်းစင်မှုကြောင့် လောက၌ ကုသိုလ်ကောင်းမှုစိုက်ပျိုးရာ လယ်မြေကောင်းသဖွယ်ဖြစ်သောရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် ထိုသို့သဘောရှိသူကို မှီဝဲ ချဉ်းကပ်ကြကုန်၏။ ထိုရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် ထိုသူအား ဒုက္ခခပ်သိမ်း ပယ်ဖျောက်ကြောင်းဖြစ်သော တရားကိုဟောကြားတော်မူကုန်၏၊ ထိုသူသည် ဤဘဝ၌ ယင်းတရားကို သိရ၍ အာသဝေါကင်းလျက်ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုရလေသတည်း။
Như cây bàng to lớn,
Với cành, lá, trái cây,
Với thân, rễ, đầy trái,
Làm chỗ trú loài chim.
Tại trú xứ thoải mái,
Các con chim làm tổ,
Cần bóng mát, hứng mát,
Cần trái cây, ăn trái.
Cũng vậy, vị trì giới,
Người có lòng tịnh tín,
Hiền hòa, lời từ tốn,
Tánh tình thật dịu hiền,
Vị đoạn tham, đoạn sân,
Ðoạn si, không lậu hoặc,
Là ruộng phước ở đời.
Họ đến người như vậy,
Họ thuyết pháp, người ấy
Ðoạn trừ mọi khổ đau,
Vị ấy ở tại đây,
Hiểu biết Chánh pháp ấy,
Viên bản nhập Niết-bàn,
Hoàn toàn không lậu hoặc.
Top: Banyan Tree, Chùa Tảo Sách
Middle: Scaly Breasted Munias
Bottom: Asian Glossy Starlings
©Ashin Sopāka 2017
Posted in Dhamma	| Tagged dhamma, faith, nibbāna
Posted on4Mar 2017 by Ashin Sopāka
“The light element, the beauty element, the base of the infinity of space element, the base of the infinity of consciousness element, and the base of nothingness element: these elements are to be attained as attainments with perception. The base of neither-perception-nor-nonperception element: this element is to be attained as an attainment with the residue of formations. The cessation of perception and feeling element: this element is to be attained as an attainment of cessation.” – SN 14.11
“Yā cāyaṁ, bhikkhu, ābhādhātu yā ca subhadhātu yā ca ākāsānañ­cāyata­na­dhātu yā ca viñ­ñā­ṇañ­cāyata­na­dhātu yā ca ākiñ­cañ­ñā­yatana­dhātu—imā dhātuyo saññāsamāpatti pattabbā. Yāyaṁ, bhikkhu, neva­saññā­nā­sañ­ñāyata­na­dhātu—ayaṁ dhātu saṅ­khā­rā­vasesa­samā­patti pattabbā. Yāyaṁ, bhikkhu, saññā­ve­dayi­ta­nirodha­dhātu—ayaṃ dhātu nirodha­samā­patti pattabbā”ti.
“ရဟန်း အာဘာဓာတ်၊ သုဘဓာတ်၊ အာကာသနဉ္စာယတနဓာတ်၊ အာကိဉ္စညာယတနဓာတ်ဟူသော ဤဓာတ်တို့သည် သညာသမာပတ်သို့ ရောက်အပ်ကုန်၏။ နေဝသညာနာသညာယတနဓာတ်သည် သင်္ခါရမှ ကြွင်းသော သမာပတ်သို့ ရောက်အပ်၏။ ရဟန်း သညာဝေဒယိတနိရောဓဓာတ်သည် နိရောဓသမာပတ် သို့ ရောက်အပ်၏။”
“Này các Tỷ-kheo, Quang giới này với Tịnh giới, Không vô biên xứ giới, Thức vô biên xứ giới, Vô sở hữu xứ giới, những giới này lấy tưởng Thiền chứng (Sannàsamàpatti) được chứng đắc. Này các Tỷ-kheo, Phi tưởng phi phi tưởng xứ giới này lấy hành hữu dư Thiền chứng được chứng đắc. Này các Tỷ-kheo, Diệt thọ tưởng giới này lấy diệt đẳng nhập được chứng đắc.”
Ground Skimmer, Blue Percher, Little Blue Darter ©Ashin Sopāka 2017
Posted in Dhamma	| Tagged arūpajjhāna, dhamma, meditation, nibbāna